Macluumaad cusub oo laga soo saaray dadkii ka dambeeyay dhibkii ka dhacay Jigjiga iyo Mustafe oo mar kale loo yeeray - BBC News Somali
Macluumaad cusub oo laga soo saaray dadkii ka dambeeyay dhibkii ka dhacay Jigjiga iyo Mustafe oo mar kale loo yeeray
25 Jannaayo 2019
Image caption Xafiiska xeer ilaalinta ayaa sheegay in lagu raad joogo 40 qof oo mas'uul ka ahayd dhibaatada
Mas'uuliyiinta xeer ilaalinta guud ee dalka auaa Shir Jaraa'id oo ay qabteen waxay ku sheegeen in 46 ruux ay mas'uul ka yihiin tacadiyadii dhacay, waxayna intaas ku dareen in 6 ka mid ah dadkaas horay gacanta loogu dhigay oo ay xiran yihiin.
Waxay sheegeen in 6-da ruux ee xiran uu ku jiro madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar.
Yaa isku haya siyaasadda deegaanka soomaalida Itoobiya?
Xeer ilaalinta ayaa shirkooda jaraa'id ku qeexay in eedeysaneyaasha lagu raad joogo ay ku kala sugan yihiin dadlka gudihiisa iyo dibaddiisaba.
Waxay sidoo kale intaas ku dareen in ay la xiriireen dowladaha ay dadka baxsaday ku sugan yihiin ayna ka codsadeen in meelaha ay joogaan laga soo xiro, loona soo gacan galiyo dowladda Itoobiya.
Qaar ka mid ah dadka lagu raad joogo ayey sheegeen iney ku sugan yihiin dalal ku yaalla qaaradda Afrika, inkastoo aysan carrabaabin.
Image caption 4-tii bishii Agoosto, 2018 ayey mudaharaadyo rabshado wata ka dhaceen Jigjiga
Dhanka kale Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumad Cumar ayaa maanta mar kale looga yeeray xafiiska Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ee magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Mustafe ayaa isla maanta u baxay halkaas, ilaa iyo haddana lama oga waxyaabaha lagala hadlayo.
Dhowr jeer ayaa madaxweynaha looga gacan haatiyay Addis Ababa, waxaana ay arrimahan daba socdaan xasarado siyaasadeed oo maalmahan ka aloosan deegaanka ismaamulka Soomaalida.